Browsing: » Home »သတင်းများ»တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် အမှတ်နဲ့ ခွဲတဲ့စနစ် ဖျက်သိမ်း လိုက်ပါပြီ.	Leaveacomment
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် အမှတ်နဲ့ ခွဲတဲ့စနစ် ဖျက်သိမ်း လိုက်ပါပြီ.	Posted by danyawadi on January 23, 2016 in သတင်းများ	အမှတ် နဲ့ ခွဲတဲ့ စနစ် ဖျက်သိမ်း လိုက်ပါပြီ ။ ဒီနှစ် ၁၀တန်း အောင်တဲ့ သူတွေ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ တက္ကသိုလ် တက်လို့ ရပါပြီ ။
← ကျွန်းသစ်​ခွဲများသိမ်​ဆည်းရမိ	ဥပဒေကြမ်း ၃ ခုအား အတည်ပြုခြင်းနှင့် အဆုံးအဖြတ် ရယူခြင်းတို့ ဆောင်ရွက် →